Fuse Links Vagadziri & Vatengesi - China Fuse Zvinongedzo Fekitori
Anochinjika echikamu-chikamu fiyuzi chinhu chakagadzirwa kubva kune yakachena simbi yakavharirwa mu cartridge yakagadzirwa kubva kumusoro-basa ceramic kana epoxy girazi. Fiyuzi chubhu yakazadzwa nemakemikari akarapwa akachena-kuchena quartz jecha seye arc-yekudzimisa svikiro. Dot-Welding ye fuse element inopera kune nguwani dzinovimbisa yakavimbika magetsi kubatana. Striker inogona kusungirirwa kune iyo fuse chinongedzo kuti ipe nekukurumidza activation ye micro-switch kuti ipe akasiyana masignini kana kucheka redunhu otomatiki.Special fuse sekuenderana neMufananidzo 1.2 ~ 1.4 inogona kupihwa zvinoenderana nevatengi zvinodiwa.
Anochinjika echikamu-chikamu fiyuzi chinhu chakagadzirwa kubva kune yakachena simbi yakavharirwa mu cartridge yakagadzirwa kubva pakakwirira tembiricha inodzivirira epoxy girazi. Fiyuzi chubhu yakazadzwa nemakemikari akarapwa akachena-kuchena quartz jecha seye arc-yekudzimisa svikiro. Dot-Welding ye fuse element inopera kune banga vanobatana rinovimbisa yakavimbika magetsi kubatana.
Anochinjika echikamu-chikamu fiyuzi chinhu chakagadzirwa kubva yakachena mhangura kana sirivheri yakavharirwa mu cartridge yakagadzirwa kubva kumusoro-basa ceramic, Fuse chubhu izere nemakemikari akarapwa akachena-akachena quartz jecha senge arc-yekudzimisa svikiro. Dot-Welding ye fuse element inopera kune zviteshi inovimbisa yakavimbika magetsi kubatana uye mafomu anoisa banga mhando vokukurukura. Chinongedzo kana chinorova chinogona kusunganidzwa kune fiyuzi chinongedzo kuratidza kutemwa kwefiyuzi kana kupa masaini akasiyana siyana uye kucheka redunhu zvoga.
Cylindrical kapu yekutaurirana yeakatemerwa azvino kusvika 60A, uye banga mabhii eakavheswa azvino kusvika ku600A, Anochinjika echikamu-chikamu fiyuzi chinhu chakagadzirwa kubva zinc zinc chiwanikwa. Vashandisi vanogona kutsiva chinhu chakapiswa fiyuzi chinhu uye voshandisa fiyuzi zvakare.